Rute naBhoazi Vanoroorana | Kutenda Kwechokwadi
1, 2. (a) Rute akanga achiita basa rei? (b) Rute akaziva nezvezvinhu zvipi zvakanaka zvaiva muMutemo waMwari uye zvaiitwa nevanhu vake?
RUTE akagwadama pedyo nemurwi wehura dzebhari dzaakanga aswera achiunganidza. Kwakanga kwava kusviba muminda yaiva muBhetrehema, uye vashandi vakawanda vakanga vava kutonanaira vakananga kugedhi reguta duku raiva pamusoro pechikomo chaiva pedyo. Rute anofanira kunge akanga arukutika, nokuti ainge ashanda kubva mangwanani. Kunyange zvakadaro akaramba achishanda, achipura hura dzacho kuti tsanga dzibude. Kunyange zvazvo basa racho rakanga rakaoma, rainge riri zuva rakanaka nokuti akawana zvaaisatombotarisira kuwana.
2 Zvinhu zvainge zvava kutanga kufambira chirikadzi iyi yechiduku here? Sezvatakaona muchitsauko chakapfuura, Rute ainge asarudza kugara navamwene vake, Naomi, achipika kuti aizogara navo uye aizoita kuti Mwari waNaomi, Jehovha, ave Mwari wakewo. Vakadzi vaviri ava vakanga vafirwa vakauya pamwe chete kuBhetrehema vachibva kuMoabhi, uye pasina nguva Rute mukadzi muMoabhi akaziva kuti Mutemo waJehovha waiva neurongwa hwaibatsira uye hwairemekedza varombo vaiva muIsraeri, kusanganisira vaibva kune dzimwe nyika. Uye akaona kuti vamwe vevanhu vaJehovha, avo vairarama vari pasi peMutemo wacho uye vakanga vadzidziswa nawo, vakaratidza nezvavaiita kuti vaida Jehovha uye vaiva nemutsa izvo zvakaporesa mwoyo wake waishungurudzika.
3, 4. (a) Bhoazi akanga akurudzira Rute sei? (b) Muenzaniso waRute ungatibatsira sei munguva dzatiri kurarama dzakaoma mune zveupfumi?
3 Mumwe wevanhu vakadaro aiva Bhoazi, murume ainge ati kurei uye akapfuma, aiva neminda umo Rute aiunganidza zvaisaririra. Musi uyu akanga amubata semwana wake. Rute akanyemwerera nechomumwoyo paakafunga nezvemashoko emutsa akataurwa naBhoazi achimurumbidza pamusana pokuriritira Naomi uye kusarudza kutsvaka kupotera pasi pemapapiro aMwari wechokwadi, Jehovha.—Verenga Rute 2:11-14.
4 Kunyange zvakadaro, Rute angangodaro akafunga nezveramangwana rake. Semunhu wekune imwe nyika aiva murombo uye asina murume kana mwana, aizozviriritira sei iye naNaomi mumakore aitevera? Vaizorarama nokungounganidza zvaisaririra here? Uye ndiani aizomuriritira kana achembera? Zvaizonzwisisika kana zvinhu zvakadaro zvaimunetsa. Munguva dzatiri kurarama dzakaoma mune zveupfumi, vakawanda vari kutambura nekuzvidya mwoyo kwakadaro. Sezvatinodzidza nezvekuti kutenda kwaRute kwakamubatsira sei kuti atsungirire matambudziko akadaro, tichawana zvakawanda zvokutevedzera.
Ndivanaani Vanoumba Mhuri?
5, 6. (a) Rute akabudirira zvakadini pazuva rake rekutanga kuunganidza zvaisaririra mumunda maBhoazi? (b) Naomi akaita sei paakaona Rute?
5 Panguva iyo Rute akanga apedza kupura bhari uye aiunganidza yose pamwe chete, akaona kuti akanga aunganidza inenge efa, kana kuti marita 22. Bhari yacho ingangodaro yairema makirogiramu 14! Zvichida akaisungira mujira ndokuitsiga pamusoro, ndokubva apinda munzira akananga kuBhetrehema kunze zvakwaisviba.—Rute 2:17.
6 Naomi akafara kuona muroora wake waaida, uye zvichida akakanuka paakaona kuwanda kwebhari yaiva naRute. Rute akauyawo nezvokudya zvaakanga asiya pane zvokudya zvakanga zvapiwa vashandi naBhoazi, nokudaro vaviri ava vakadya vose zvokudya zvisingashamisiri. Naomi akabvunza kuti: “Waunganidza zvanga zvichisaririra kupi nhasi, uye washanda kupi? Munhu ava nehanya newe ngaakomborerwe.” (Rute 2:19) Naomi paakaona kuti Rute aiva nebhari yakawanda akaziva kuti mumwe munhu aifanira kunge amubatsira.
7, 8. (a) Naomi akaona mutsa waBhoazi sewaibva kuna ani, uye nei zvakadaro? (b) Rute akaratidzazve sei rudo rwakavimbika kuna vamwene vake?
7 Vaviri vacho vakatanga kukurukura, Rute ndokuudza Naomi nezvemutsa waBhoazi. Abatwa-batwa nazvo, Naomi akapindura kuti: “Ngaakomborerwe naJehovha, iye asina kurega kuva nomutsa worudo kuvapenyu nevakafa.” (Rute 2:20) Akaona mutsa waBhoazi sewaibva kuna Jehovha, uyo anoita kuti vashumiri vake vave nerupo uye anovimbisa kupa vanhu vake mubayiro nemhaka yemutsa wavanoratidza. *—Verenga Zvirevo 19:17.
8 Naomi akakurudzira Rute kuti abvume zvakanga zvataurwa naBhoazi zvokuti arambe achiunganidza zvaisaririra muminda yake uye kuti arambe ari pedyo nevasikana vake kuitira kuti asanetswa nevakohwi. Rute akateerera zano iroro. Uyewo “akaramba achigara navamwene vake.” (Rute 2:22, 23) Mumashoko iwayo tinoonazve rudo rwakavimbika rwaanozivikanwa narwo. Muenzaniso waRute ungaita kuti tizvibvunze kana tichitsigira vemumhuri medu nokuvimbika uye tichivapa rubatsiro rwavanoda. Jehovha haambofi akatadza kucherechedza rudo rwakavimbika rwakadaro.
Zvakaitwa naRute naNaomi zvinotiyeuchidza kuti tikoshese mhuri yatiinayo
9. Tingadzidzei kuna Rute naNaomi nezvemhuri?
9 Rute naNaomi vakanga vasiri mhuri chaiyo here? Vamwe vanofunga kuti panofanira kuva nomumwe munhu anozadzisa nzvimbo imwe neimwe—murume, mudzimai, mwanakomana, mwanasikana, sekuru kana kuti mbuya, zvichingodaro—kuti ive mhuri “chaiyo.” Asi zvakaitwa naRute naNaomi zvinotiyeuchidza kuti vashumiri vaJehovha vanogona kuzarura mwoyo yavo voita kuti kunyange mhuri duku zvikuru dziratidze ushamwari, mutsa, nerudo. Unokoshesa mhuri yauinayo here? Jesu akayeuchidza vateveri vake kuti ungano yechiKristu inogona kuita semhuri kunyange kune vaya vasina.—Mako 10:29, 30.
Rute naNaomi vaibatsirana uye vaikurudzirana
“Iye Ndomumwe Wevadzikinuri Vedu”
10. Naomi aida kubatsira Rute sei?
10 Kubva panguva yokukohwa bhari muna April kusvika panguva yokukohwa gorosi muna June, Rute akaramba achiunganidza zvaisaririra muminda yaBhoazi. Mavhiki zvaakapfuura, hapana mubvunzo kuti Naomi akafungisisa pamusoro pekuti chii chaaigona kuitira muroora wake waaida. Vachiri kuMoabhi, Naomi aiva nechokwadi chokuti aisazombofa abatsira Rute kuwana mumwe murume. (Rute 1:11-13) Zvisinei, panguva ino, akanga ava kutanga kuva nedzimwe pfungwa. Akaenda kuna Rute ndokuti: “Mwanasikana wangu, handifaniri kukutsvakira nzvimbo yokuzororera . . . here?” (Rute 3:1) Yaiva tsika yavo mazuva iwayo kuti vabereki vatsvakire vana vavo munhu wokuroorana naye, uye Rute akanga ava mwanasikana chaiye kuna Naomi. Naomi aida kutsvakira Rute “nzvimbo yokuzororera”—kureva musha uye murume zvaizogona kumuita kuti ave akachengeteka. Asi Naomi aizoita sei?
11, 12. (a) Naomi paakadana Bhoazi kuti ‘mudzikinuri,’ aifunga nezveurongwa hupi hwerudo hwaiva muMutemo waMwari? (b) Rute akaitei nezano ravamwene vake?
11 Rute paakatanga kutaura nezvaBhoazi, Naomi akati: “Murume wacho ane ukama nesu. Iye ndomumwe wevadzikinuri vedu.” (Rute 2:20) Izvozvo zvairevei? Mutemo waMwari waakapa Israeri waisanganisira urongwa hunoratidza rudo kumhuri dzaiomerwa neupenyu pamusana peurombo kana kuti kufirwa. Kana mukadzi aifirwa nomurume asati ava nemwana, ainyanya kushungurudzika nokuti zita romurume wake raizoguma, aisazova nevana muzvizvarwa zvaizotevera. Zvisinei, Mutemo waMwari waibvumira kuti munun’una womurume wacho aroore chirikadzi yacho kuitira kuti ibereke mugari wenhaka aizoita kuti zita romurume wayo akafa rirambe riripo otarisira pfuma yemhuri. *—Dheut. 25:5-7.
12 Naomi akatsanangurira Rute zvaakanga asarudza nezveurongwa hwewanano yakadaro. Tingafungidzira mukadzi wacho wechiduku achinyatsovhura maziso kuratidza kushamisika vamwene vake sezvavaitaura. Mutemo wevaIsraeri wakanga uchiri mutsva kuna Rute, uye akanga asati ajairana netsika dzawo dzakawanda dzacho. Kunyange zvakadaro, Rute akaremekedza Naomi zvikuru zvekuti akanyatsoteerera shoko rimwe nerimwe raakataura. Zano rakapiwa Rute naNaomi ringave raiita serakaoma kana kuti serinonyadzisa—kunyange kutobvisa chimiro—asi Rute akaribvuma. Akataura nounyoro kuti: “Ndichaita zvose zvamunondiudza.”—Rute 3:5.
13. Tinodzidzei kubva kuna Rute nezvekugamuchira mazano evanhu vati kurei? (Onawo Jobho 12:12.)
13 Dzimwe nguva zvakaomera vechiduku kuti vateerere mazano evaya vati kurei uye vane ruzivo rwakati wandei muupenyu. Zviri nyore kufunga kuti vanhu vakuru havanyatsonzwisisi matambudziko anosangana nevechiduku. Muenzaniso waRute wokuzvininipisa unotiyeuchidza kuti kuteerera uchenjeri hwevanhu vati kurei vanotida uye vanoda kuti zvitifambire zvakanaka kunogona kutibatsira zvikuru. (Verenga Pisarema 71:17, 18.) Asi zano raNaomi raiva ripi, uye Rute akabatsirwa here nokuriteerera?
Rute Anoenda Kuburiro
14. Chii chainzi buriro, uye raishandiswa sei?
14 Manheru iwayo, Rute akananga kuburiro—nzvimbo yakati sandarara uye yakatsindirwa kwaiendwa nevarimi vakawanda nezvirimwa zvavo kuti zvipurwe uye zviurutswe. Nzvimbo yaisarudzwa yaiwanzova mujinga megomo kana kuti pamusoro pegomo, mhepo payaivhuvhuta zvine simba zuva rava kunorereka uye pakwainge kuchangosviba. Kuti tsanga dziparadzane nehundi nemashanga, vashandi vaishandisa maforogo mahombe kana mafoshoro kuti vakande musanganiswa wacho mumhepo, iyo yaizotakura hundi yakareruka zvoita kuti tsanga dzinoti remei dzidonhere pasi.
15, 16. (a) Rondedzera zvakaitika paburiro Bhoazi zvaakanga apedza kushanda ava manheru. (b) Bhoazi akaziva sei kuti Rute ainge arere kutsoka dzake?
15 Rute aicherechedza nokungwarira vashandi zvavaipedzisa basa ravo manheru iwayo. Bhoazi ndiye aiona nezvekuurutswa kwebhari yake, iyo yaiwanda ichiita murwi wakakura. Paakanga adya akaguta, akarara padivi pemurwi wacho. Zviri pachena kuti izvi zvaiitwa nevakawanda, zvichida zvaiitirwa kuchengetedza goho rinokosha kuti risabiwa kana kupambwa. Rute akaona Bhoazi achigadzirira kuti arare. Yakanga yasvika nguva yokuita zvaakanga audzwa naNaomi.
16 Rute akanyahwaira achiswedera pedyo, hana yake ichidandauka. Akaona kuti Bhoazi akanga achidzipfodora. Saka sezvakanga zvataurwa naNaomi, akaenda kutsoka dzaBhoazi, akadzifukura, ndokurara pedyo nadzo. Akabva amirira. Nguva yakafamba. Kuna Rute inofanira kunge yakaita segore chairo. Pava pakati peusiku, Bhoazi akazotanga kushanyarika. Ava kudedera nechando, Bhoazi akagonya, zvichida achiitira kuti afukidzezve tsoka dzake. Asi akanzwa kuti paiva nemumwe munhu. Nhoroondo yacho inoti, “Akaona mukadzi akarara kutsoka dzake.”—Rute 3:8.
17. Vaya vanoti paiva nechinhu chisina kukodzera pane zvakaitwa naRute havafungi nezvezvinhu zviviri zvipi zviri pachena?
17 Bhoazi akabvunza kuti: “Ndiwe ani?” Zvichida inzwi rake richidedera, Rute akapindura kuti: “Ndini Rute murandasikana wenyu, fukidzai murandasikana wenyu nokunoperera nguo yenyu, nokuti muri mudzikinuri.” (Rute 3:9) Mazuva ano vamwe vadudziri vanoti zvakaitwa naRute uye zvaakataura zvaiva nepfungwa yezvepabonde, asi pane zvinhu zviviri zvavasingafungi nezvazvo. Chekutanga, Rute akanga achiita maererano netsika dzemazuva acho, zhinji dzacho dzisingachazivikanwi mazuva ano. Saka kwaizova kukanganisa kuenzanisa zvaakaita netsika dzakaora dziriko mazuva ano. Chechipiri, zvakazotaurwa naBhoazi zvinonyatsoratidza kuti akaona zvakaitwa naRute setsika yakanaka uye inorumbidzwa zvikuru.
Vavariro dzaRute pakutsvaka Bhoazi dzakanga dzakanaka uye dzisina udyire
18. Chii chakataurwa naBhoazi kuti anyaradze Rute, uye aireva zviitiko zvipi zviviri zvairatidza rudo rwakavimbika rwaRute?
18 Bhoazi akataura, uye hapana mubvunzo kuti inzwi rake rakanyorovera rakanyaradza Rute. Akati: “Jehovha ngaakukomborere, mwanasikana wangu. Waratidza mutsa wako worudo zviri nani pakupedzisira kupfuura pakutanga, nokusatevera majaya angava akaderera kana kuti akapfuma.” (Rute 3:10) Paakati “pakutanga,” Bhoazi aireva rudo rwakavimbika rwaRute rwaakaratidza pakuperekedza Naomi kudzokera kuIsraeri uye pakumuriritira. Paakati “pakupedzisira,” aireva zvakanga zvichiitika panguva iyoyo. Bhoazi akaona kuti zvingadai zvakaitira nyore mukadzi wechiduku akaita saRute kutsvaka murume pavarume vechiduku, angava mupfumi kana kuti murombo. Panzvimbo pezvo, Rute aida kuita zvakanaka kwete kuna Naomi chete asiwo kumurume waNaomi akanga afa, kuti zita remurume waNaomi rirambe riripo munyika yake. Zviri nyore kuona kuti nei Bhoazi akasvikwa pamwoyo nezvakaitwa nemukadzi wechiduku uyu zvokusava neudyire.
19, 20. (a) Nei Bhoazi asina kubva angoroora Rute pakarepo? (b) Bhoazi akaratidza sei mutsa kuna Rute uye kuti aisada kuti mukurumbira wake ukanganiswe?
19 Bhoazi akaenderera mberi achiti: “Zvino, mwanasikana wangu, usatya. Zvose zvaunotaura ndichakuitira, nokuti munhu wose ari mukati megedhi revanhu vokwangu anoziva kuti uri mukadzi akanaka kwazvo.” (Rute 3:11) Akafadzwa netarisiro yekuroora Rute; zvichida haana kunyanya kushamiswa paakakumbirwa kuti ave mudzikinuri wake. Zvisinei, Bhoazi aiva murume akarurama, uye ainge asiri kuzongoita zvaaida. Akaudza Rute kuti paiva nemumwe mudzikinuri aiva pedyo zvikuru nemhuri yemurume waNaomi ainge afa. Bhoazi aizotanga ataura nemurume wacho omupa mukana wokuva murume waRute.
Nemhaka yokuti Rute aibata vamwe nomutsa uye noruremekedzo, akawana mukurumbira wakanaka kwazvo
20 Bhoazi akakurudzira Rute kuti arare zvakare uye azorore kusvikira ava mambakwedza; zvadaro ozoverevedza achienda. Bhoazi aida kuchengetedza mukurumbira waRute newakewo, sezvo vanhu vaizofungira zvisizvo kuti pane chimwe chinhu chisina kuchena chainge chaitika. Rute akararazve pedyo netsoka dzaBhoazi, zvichida pfungwa dzake dzagadzikana pashure pokunge Bhoazi amupindura nemutsa pane zvaakanga akumbira. Zvadaro, Rute akamuka kuchakasviba. Bhoazi akaisa chipo chebhari mujasi rake, Rute ndokudzokera kuBhetrehema.—Verenga Rute 3:13-15.
21. Chii chakaita kuti Rute azivikanwe se“mukadzi akanaka kwazvo,” uye tingatevedzera sei muenzaniso wake?
21 Rute anofanira kunge akagutsikana zvikuru paaifunga zvainge zvataurwa naBhoazi—kuti aizivikanwa pakati pevanhu vose se“mukadzi akanaka kwazvo”! Hapana mubvunzo kuti kuda kwake kuziva Jehovha uye kumushumira kwakaita kuti ave nemukurumbira iwoyo. Akanga aratidzawo mutsa nehanya zvakakura kuna Naomi nevanhu vekwake, achitoda kutevedzera mararamiro netsika zvaakanga asina kujairana nazvo. Kana tikatevedzera kutenda kwaRute, ticharemekedza zvikuru vamwe, mararamiro avo uye tsika dzavo. Kana tikadaro, isuwo tingava nemukurumbira wakanaka.
Nzvimbo Yokuzororera yaRute
22, 23. (a) Chii chingava chairehwa nechipo chakapiwa Rute naBhoazi? (Onawo mashoko omuzasi.) (b) Naomi akakurudzira Rute kuti aitei?
22 “Ndiwe ani, mwanasikana wangu?” Naomi akadaro Rute paakasvika kumba. Zvimwe kwainge kuchiri nerima uye asingaoni zvakajeka, asi Naomi aidawo kuziva kana Rute akanga achiri chirikadzi isina wainodanana naye kana kuti akanga ava munhu ane tarisiro yekuroorwa. Rute akakurumidza kuudza vamwene vake zvose zvakanga zvaitika pakati pake naBhoazi. Akabva avapawo chipo chebhari chaakanga anzi naBhoazi avape. *—Rute 3:16, 17.
23 Nokuchenjera, Naomi akakurudzira Rute kuti agare pamba akazvinyararira hake zuva iroro pane kuti aende kunounganidza zvaisaririra muminda. Akavimbisa Rute achiti: “Murume wacho haazozorori kutoti apedza nyaya yacho nhasi.”—Rute 3:18.
24, 25. (a) Bhoazi akaratidza sei kuti aiva murume akarurama asina udyire? (b) Rute akakomborerwa sei?
24 Zvakataurwa naNaomi nezvaBhoazi zvaiva zvechokwadi. Akaenda kugedhi reguta, kwaiwanzoungana vakuru veguta, ndokumirira kusvikira murume aiva hama yepedyo kupfuura Bhoazi adarika nepo. Pamberi pezvapupu, Bhoazi akapa murume wacho mukana wokuva mudzikinuri nokuroora Rute. Zvisinei, murume wacho akaramba, achitaura kuti kuita izvozvo kwaizoparadza nhaka yake. Zvadaro, pamberi pezvapupu zvaivapo pagedhi reguta, Bhoazi akataura kuti aizova mudzikinuri, achitenga munda wemurume waNaomi ainge afa, Erimereki, uye kuroora Rute, chirikadzi yemwanakomana waErimereki Maroni. Bhoazi akataura nezvetariro yake yokuti kuita izvozvo ‘kwaizoita kuti amutse zita romurume akafa panhaka yake.’ (Rute 4:1-10) Zvechokwadi Bhoazi aiva murume akarurama asina udyire.
25 Bhoazi akaroora Rute. Tinobva tazoverenga kuti: “Jehovha akaita kuti abate pamuviri akabereka mwanakomana.” Vakadzi vemuBhetrehema vakakomborera Naomi vakarumbidza Rute pamusana pekuva kwake aiva nani kuna Naomi kupfuura vanakomana vanomwe. Pave paya, tinonzwa kuti mwanakomana waRute akava tateguru waMambo mukuru Dhavhidhi. (Rute 4:11-22) Dhavhidhi akavawo tateguru waJesu Kristu.—Mat. 1:1. *
Jehovha akakomborera Rute neropafadzo yokuva mbuya vaMesiya
26. Zvakaitwa naRute naNaomi zvinotiyeuchidza nezvei?
26 Rute akakomborerwa zvikuru sezvakaita Naomi, uyo akabatsira pakurera mwana wacho sokunge kuti aiva wake. Upenyu hwevakadzi vaviri ava hunoshanda sezviyeuchidzo zvakajeka zvokuti Jehovha Mwari anocherechedza vose vanoshanda nesimba vachizvininipisa kuti variritire vekwavo uye vanomushumira vakavimbika nevanhu vake vakasarudzwa. Haafi akakundikana kukomborera vanhu vakatendeka, vakadai saBhoazi, Naomi naRute.
^ ndima 7 Sezvakaonekwa naNaomi, mutsa waJehovha haungoratidzwi vapenyu chete; kunyange vakafa vanogona kubatsirwa nawo. Naomi akanga afirwa nemurume nevanakomana vaviri. Rute akanga afirwa nemurume. Zvechokwadi varume vatatu ava vaidiwa zvikuru naNaomi naRute. Kutaura zvazviri, chero mutsa wakaratidzwa kuna Naomi uye kuna Rute waiva mutsa waiitirwa varume vaizoda kuti madzimai iwayo ariritirwe.
^ ndima 11 Zviri pachena kuti kodzero yekuroora chirikadzi yakadaro yaitanga kupiwa vakoma nevanun’una vemufi yobva yazoenda kuhama dzechirume dzepedyo zvikuru, sezvaiitawo kodzero yekuwana pfuma yenhaka.—Num. 27:5-11.
^ ndima 22 Bhoazi akapa Rute zviyero zvitanhatu zvaiva neuremu husina kutaurwa—zvichida zvichipa pfungwa yokuti sezvo mazuva matanhatu ekushanda aiteverwa nezororo reSabata, mazuva aRute ekushanda zvakaoma sechirikadzi aizokurumidza kuteverwa ne“zororo” rinobva pakuva nemurume uye musha wakachengeteka. Kune rimwe divi, zviyero zvitanhatu—zvichida mafoshoro—zvingava izvo chete zvaigona kutakurwa naRute.
^ ndima 25 Rute ndemumwe wevakadzi vashanu vanotaurwa neBhaibheri mumutsara wedzinza raJesu. Mumwe ndiRakabhi, aiva amai vaBhoazi. (Mat. 1:3, 5, 16) Kufanana naRute, aisava muIsraeri.
Rute akaratidza sei rudo rwakavimbika kuna Naomi?
Naomi akaratidza sei rudo rwakavimbika kuna Rute?
Nei Jehovha achikoshesa vashumiri vakaita saBhoazi, Naomi uye Rute?
Uchaitei kuti utevedzere kutenda kwaRute?
Rute​—“Mukadzi Akanaka Kwazvo”